USB Spy Camera အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ဘူးခွံလေးမှာ Spy camera လို. လုံးဝ မရေးထားပါဘူး
ဒီတော့ မိတ်ဆွေ မှာလိုက်ရင် Spy Camera မှာမယ်မှန်း ဘယ်သူမှ မသိဘူးပေါ့
USB Stick တစ်ခုတည်းမှာလို. အထင်လွဲမှာကြောက်ရင် တခြားပစ္စည်းများနဲ. တွဲမှာလိုက်ပါ။
ကွာလတီကောင်း၊ ရုပ်ထွက်ရော အသံပါကောင်းလွန်းလှတဲ့
USB Spy Camera လေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အခု Spy Camera လေးက မန်မိုရီ ၈ ဂစ်ပါဝင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်နဲ့ အသံကို မြင်ရကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာကို အသုံးပြုဖို့ကတော့ လျှပ်စစ်ရတဲ့ ပလပ်ပေါက်မှာတပ်ဆင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီ်း USB Plug တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မလို့ USB ကြိုးနဲ့လည်း ဖုန်းအားသွင်းလို့ရပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Spy Adaptar မှန်းလည်း မသိတော့ပါဘူး။
တကယ်လို့ ၈ဂစ် ပြည့်သွားရင် လည်း အရှေ့ ကဖိုင်ကို အော်တိုဖျက်ပေးပြီး အသစ်ပြန်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ြ
ပန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့် ပေးထားတဲ့ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးကြည့်ရှူနိုင်မှာပါ။
32 အထိ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
memory ပြောင်းဖို.ရန် အားသွင်းတဲဘက်က ခွာထုတ် လှဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Price : 39000 Ks (၈gb internal memory ပါဝင်သည်။)
ဈေးနှုန်း – 39000 kyats
အမည်: USB Spy Camera